Xaaji Muuse Suudi: Heshiis hadda kaddib Farmaajo laga raadinayo ma jiro - News - Wararka - Somali Forum - Somalia Online
Xaaji Muuse Suudi: Heshiis hadda kaddib Farmaajo laga raadinayo ma jiro
Kismaayo (Caasimadda Online) – Muuse Suudi Yalaxow oo ka mida senatoorada Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa khudbad ka jeediyey xafladda caleemo-saarka Axmed Madoobe ee magaalada Kismaayo.
Wuxuu sheegay in doorashadii Axmed Madoobe ay ahayd wixii la sameyn karay oo aysan fileyn mid ka fiican inay ka dhacdo, wuxuuna u hambalyeeyay Axmed Madoobe isagoo dhinaca kale dhaliil u jeediyey Madaxweynaha Soomaaliya oo uu sheegay inuusan jirin heshiis kala oo laga raaadinayo.
“Heshiis hadda kaddib Farmaajo ku dhiman oo laga raadinayo ma jiro, Farmaajo waxaa labada lugood mid ka heysata Puntland, midda kalena Jubbaland, gacanta midig Galmudug ayuu ku heystaa, waxaa u soo haray Calool iyo Af iyo Gacan bidix oo wax lagu cuni karin, intaasna lalama shaqeyn karo..” ayuu yiri Muuse Suudi oo khudbadiisa ay sacab badan soo jiidatay.
Wuxuu sheegay in Farmaajo aanay jirin Qof uu rabo, balse uu adeegsado dad uu sheegay inuu ka dhex hadlo qof walibana uu u adeegsado Qabiilkeeda.
“Farmaajo lama maqlo waa is qariya, dadka uu ka dhex hadlaayana waan ognahay hadalkooda ayaa laga gartaa” ayuu yiri Muuse Suudi.
Isagoo ka hadlayay amarrada ka soo baxa dowladda Federaalka ayuu sheegay inuu soo wada saaro Madaxweyne Farmaajo loona dhiibo wasiirada, wuxuuna yiri:
“Waxaan Codsanaa in la Tashado , Dalka Ceel ayuu ku dhacay , amar walba ee soo baxa waxaa soo saara Farmaajo, amarkiisa ayay wax walba ku dhacaan ”
Xafladda caleemo saarka Axmed Madoobe waxaa ku dhammaa mucaaradka Madaxda dowladda Federaalka iyo wafdi ka socday dowladda Kenya.